Ifektri Yekhaya Elinamakha - Abenzi be-China Home Fragrance, abahlinzeki
Ama-Aromatic Air Fresheners eHhovisi Lasekhaya Nezipho Zokunethezeka Abekelwe Abesifazane
• Isethi Yomuthi Womhlanga Wemvelo: Iphunga elingu-3 lingakhethwa: IRose, iJasmine, i-orchid, ibhodlela lengilazi elicacile nebhokisi lezipho. Umhlanga unamathela ngamafutha abalulekile namafutha wephunga asezingeni eliphakeme esebenzisa izinduku zomhlanga. Alikho ilangabi elidingekayo futhi eliphephile ukusebenzisa. Iphunga elihle lomoya oqabulayo wegumbi lokuphumula, indlu yokugezela, ikhishi, igumbi lokulala noma igumbi lokudlela. Ukuhola impilo engcono. • Iphunga Lemvelo Nezinto Eziphephile: Siyathembisa ukuthi sivumelanisa izinto ezisezingeni eliphakeme, iphunga lembali elimnandi likunikeza umuzwa wemvelo, i-natura ...
Isethi Yomuthi Womhlanga Wemvelo, Iphunga Lasekhaya & Uhlanze Umoya, Igumbi Eliqabulayo
• Isethi Yomuthi Womhlanga Wemvelo: Iphunga elingu-2 lingakhethwa: I-Ocean neLemon, ibhodlela lengilazi elicacile nebhokisi lesipho. Umhlanga unamathela ngamafutha abalulekile namafutha wephunga asezingeni eliphakeme esebenzisa izinduku zomhlanga. Alikho ilangabi elidingekayo futhi eliphephile ukusebenzisa. Iphunga elihle lomoya oqabulayo wegumbi lokuphumula, indlu yokugezela, ikhishi, igumbi lokulala noma igumbi lokudlela. Ukuhola impilo engcono. • Iphunga Lemvelo Nezinto Eziphephile: Siyathembisa ukuthi sivumelanisa izinto ezisezingeni eliphakeme, iphunga lembali elimnandi likunikeza umuzwa wegundane lemvelo ...
Amapokhethi anephunga elikhanyayo le-Drawer ne-Closet, Izikhwama ZikaKhisimusi Ezihlala Isikhathi Eside
Isikhwama samaphepha enhlaka senziwe ngamafutha e-vermiculite nawaseFrance adlulisa isitifiketi se-MSDS. Isachets sephunga elimnandi lasekhaya siletha injabulo nokumangala, beka ikhabethe lomoya oqabulayo we-deodorizer izikhwama zamasachets ezinamakhabethe kanye nekhabethe ukudala iphunga lokwamukela. Iphunga Elide Elihlala Njalo Ukuze Ukhethe Kuso, Ngephunga leleveli ebuyekeziwe, idilakhethi lethu elinamakha ekhabethe linomphumela ohlala njalo. Kwenza Umqondo Omkhulu Wesipho: • Zonke izinhlobo zezithelo zinuka njengezithelo zangempela, ezintsha nezithambile ...